Boosaaso/Garowe: Qaar kamid ah barakacayaasha oo ka cabanaya nolol xumo soo foodsaartay. – Radio Daljir
Boosaaso, April 09 – Wixii ka dambeeyay burburkii dawladii dhexe ee somaliya magaalada Bosaso waxay hooyo u noqotay dad aad u farabadan kuwaas oo ka soo barakacayay dagaalada iyo dhibaatooyinka ka taagan koonfurta Somaliya.
Dadkan barakacayaasha ah ayaa noloshooda ku maareeya siyaabo kaladuwan, iyadoo taasi ay jirto ayaa mudooyinkii u dambeeyay waxaa soo badanayay cabashada ay muujinayaan dadka barakacayaasha ah.
Xerada qaxootiga ee Safarow waa mid ka mid ah xeryaha ay sida wayn ugu noolyihiin dadka soo baracay, waxana iminka ay dadkaas si wayn uga cabanayaan xaalado la soo darsay oo ay kamid tahay caafimaad darro, biyo la?aan iyo adeega bulshada oo gabaabsi ku ah xeradaas.
Aamina Cawil Ciise waa guddoomiyaha xerada Safarow ee bariga magaalada Boosaaso waxana iyadoo u waramaysay Daljir u sheegtay in xaalku iminka uu yahay mid ka soo daraya iyadoo sheegtay in hadii dadkaasi ay san helin gargaar deg-deg ah in arinku uu isbadali karo.
?xaalada caafimaad waa mid halis ma helno caafimaad buuxa ma helno gobo caafimaad oo ka jira xerada hadii uu qof kaa xanuunsado saq barkii waxaadan helayn goob aad ula cararto oo aad ku dabiibto? ayay tiri Aamino cawil ciise oo ah maamulka Kaamkaasi?
Sidoo kale bulshada kaamkaas ku sugan ayaan helin biyo ay cabbaan waxayna biyuhu yihiin kuwo aan si buuxda looga helin xerada. Aamia Cawil oo sii hadlaysa ayaa tiri: ?Biyaha waxaanu ka raadsanaa ceel aad uga fog xerada anagoo soo dhaansana jirgaano 20 qaad ah oo aan kafayn karin baahida biyeed ee kajirta kaamka, laakiin hadii aanu helno biyaha xerada gudeheeda ayaa nala kasiiyaa 4,000 Sh so. Anagoo qaarkaya aanu awoodin in ay bixiyaan lacagahaasi?
Dhibaatooyinka ka jira xerada qaxootiga ee Sarafow maahan kuwo halkan lagu soo koobi karo waxayna bulshadu kuu sheegayaan in dhibaatooyinku ay yihiin kuwo aad u badan. Dhibaatada kale ka jirta xeradaasi qaxooti ayaa ah gaadiid la?aan maadaama xeradu ay ka durugsantahay magaalada .
Ugu dambayntii bulshada ku dhaqan xerada qaxootiga ee Safarow ayaa ka codsanaya maamulka degmada Boosaaso, kan gobolka Bari, hay?ad caalamiga ah iyo ciddii kale ee wax u qaban karta in lala soo gaaro gargaar deg deg ah.
Magaalada Garoowe ee xarunta Puntlabd waxa ay ka mid tahay goobaha ay barakacayaashu sida xoogga ah u joogaan.
Maanta ayaa waxaa xerada qaxootiga ee Waaberi soo maray wariye Cali Cabdilcasiis Fantastic dabadeedna waxa uu soo diyaariyay warbixintan qotoda-dheer taasoo uu diiradda ku saarayo xaaladda nololeed iyo tan shaqo ee barakacayaasha.